Abe-ANC baphika eyokukhipha uZuma - Isolezwe
September 12 2012 at 12:45pm By SAPA
INTATHELI YESOLEZWE Amalungu e-ANC KwaZulu-Natal izolo akuphikile obekubikwa ngabezindaba ngempelasonto kokuthi abopha uzungu lokukhipha uMengameli Jacob Zuma. “UDkt Zweli Mkhize, Mnuz Senzo Mchunu noMnuz Bheki Cele sebekubeke kwacaca ukuthi bona bayabeseka ubuholi obukhona njengamanje be-ANC,” kusho uMnuz Sihle Zikalala onguNobhala we-ANC KwaZulu-Natal. Uthe imibiko ethi uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uDkt Mkhize, uNgqongqoshe wezeMfundo, uMchunu, nowayenguMkhuzi wamaPhoyisa, uCele, bafuna uZuma aphume nobuholi obuphethe, yimizamo nje ebhedayo yabafuna kushintshwe ubuholi beqembu. “Sifuna ukukugcizelela ukuthi i-ANC KwaZulu-Natal ike yaxhumana nalaba okuvele kwabezindaba ukuthi abasamfuni uZuma nobuholi obukhona kanti bonke bayaziqhelelanisa naleli tulo lokuketula ubuholi,” kusho uZikalala. NgeSonto kwabikwa ukuthi uCele uveze ukuthi weseka noma ngabe ngubani, inqobo nje uma kungeyena uZuma. Amaphephandaba angeSonto abike ukuthi uCele ube nemihlangano nePhini likaMengameli, uMnuz Kgalema Motlanthe, uNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko, uMnuz Paul Mashatile, namaqoqwana angahambisani noZuma. Kanti iphephandaba iThe Sunday Independent lona libike ukuthi elinye lamaqoqo elingahambisani nokuthi uZuma aphathe izwe neqembu ihlandla lesibili belihlangene eSandton ngoLwesithathu olwedlule. Libike nokuthi uCele naye ubekhona kulowo mhlangano kodwa yena ukuphikile ukuthi ubekhona. UZikalala uthe isifundazwe sizodingida indaba yobuholi uma iNational Executive Committee isikhiphe umyalelo wokuba kwenziwe lokho ngenyanga ezayo. “Njengoba sekusondele ukuba kuyiwe engqungqutheleni kazwelonke, sicela abezindaba ukuba bakugweme ukusetshenziswa ngabantu abathile ukusabalalisa izindaba ezingamampunge ngenhloso yokudala uqhekeko nongabazane kubaholi,” kusho uZikalala. Comment Guidelines
Weseka uNyazi owaqembuka eBuhleni Sebephucwa okokungcwaba emathuneni Usinde edunwa imoto oweChiefs Imvunge oweDA evela kuFacebook egqoke ... UZikalala usephakwe esiShayamthetho Property
IOL / Isolezwe / Abe-ANC baphika eyokukhipha uZuma We like to make your life easier